Ungazithumela njani ngaphandle izingxoxo kuWhatsApp nakwiTelegram | I-Androidsis
I-WhatsApp kunye neTelegram zizicelo zemiyalezo emibini ezigqwesileyo kwi-Android. Uninzi lwabasebenzisi basebenzisa omnye wabo, okanye mhlawumbi bobabini, kwiifowuni zabo. Ke ngoko, ekuhambeni kwexesha kunokwenzeka ukuba izingxoxo ezininzi ziya kuqokelela kwizicelo ezibini. Ke kunedatha eninzi okanye iifoto ongafuniyo ukuphulukana nazo.
Ke ngoko, kuya kufuneka ujonge iindlela zokuphepha ukulahlekelwa yile datha. Zombini i-WhatsApp kunye neTelegram sivumele ukuthumela izingxoxo kumazwe angaphandle ngendlela elula. Enye indlela yokubasindisa, kuba zininzi. Emva koko siza kukuxelela indlela efezekiswa ngayo kwezi zimbini zokusebenza.
Ezi ndlela zimbini zilula ukuzisebenzisa. Ke ziba yindlela elungileyo yokwenza ungaze ulahlekelwe ziincoko esinazo kuWhatsApp okanye kwiTelegram. Oku kubalulekile, kuba abasebenzisi bathambekele ekubeni neencoko ezininzi kwizicelo ezibini, ngeefayile, iifoto, okanye iividiyo ezithunyelwe kubo. Kwaye akukho mntu ufuna ukuphulukana nale datha ethunyelwe kwincoko.
Uyenza njani indawo yogcino yesandla ye-Android kwiGoogle Drayivu
1 Ukuthumela ngaphandle izingxoxo kuWhatsApp
2 Ukuthumela ngaphandle izingxoxo kwiTelegram
Ukuthumela ngaphandle izingxoxo kuWhatsApp
Kwimeko ye-WhatsApp sine amathuba okuthumela ngaphandle izingxoxo ngokwahlukeneyo. Ukuba sifuna ukubasindisa bonke, ke kungcono ukwenza isipele, into elula kakhulu kwisicelo semiyalezo esithandwayo. Kule meko, sikubonisa indlela esingathumela ngayo ngaphandle izingxoxo kwisicelo. Zimbini iindlela zokwenza oku.
Singangena kwincoko ethile esinayo kuWhatsApp emva koko Cofa kumanqaku amathathu athe nkqo esinayo kwinxalenye ephezulu yesikrini. Imenyu yokuqulathiweyo emva koko iyavela kwikona leyo, apho sinokukhetha khona. Olunye ukhetho kolu luhlu kukuthumela ngaphandle incoko. Ke ngoko, ucofa kwaye ukhethe indlela yokuthumela ngaphandle loo ncoko. Elula njengaleyo.
Kuyenzeka ukuba ukwenze oko kuseto lweWhatsApp, ezihlaziyiweyo kulo nyaka. Singena kubo kwaye emva koko kufuneka siye kwicandelo leengxoxo, nelinye lalawo avela kwiscreen. Emva koko nqakraza kwicandelo lembali yengxoxo, apho emva koko sinokukhetha okuninzi. Olunye ukhetho apha kukuthumela ngaphandle incoko, ekufuneka sicofe kuyo. Isicelo ke sicela ukuba sikhethe incoko esifuna ukuyithumela ngaphandle kwaye iya kuthi isibuze ukuba senze njani. Oku kugqiba inkqubo.
Ukuthumela ngaphandle izingxoxo kwiTelegram
I-Telegraph ikwanomsebenzi ekuvumela ukuba uthumele ngaphandle izingxoxo. Ngokungafaniyo noWhatsApp, kule meko kufuneka thumela zonke incoko kwisicelo. Ke asinakho ithuba lokukhetha kuphela inomdla kuthi kule meko. Kodwa nangayiphi na imeko, yinto eluncedo kwisicelo. Ukongeza, kufuneka yenziwe kwinguqulelo yedesktop yesicelo.
Kuya kufuneka sivule kuqala imenyu esecaleni yeTelegram, ngokunqakraza kwimigca ethe tyaba ngasekhohlo ngasentla. Ke, kuya kufuneka siye kuseto lwesicelo. Xa useto luvela kwiscreen, kufuneka singene kuseto oluphambili lwescreen. Kukho icandelo elinedatha kunye nokugcinwa, apho sinokhetho lokuthumela idatha yeTelegram. Ke ngoko, cofa olu khetho ukuqala inkqubo.
Isicelo siza kusibuza kwiwindow yokuqala ukuba yeyiphi idatha esifuna ukuyithumela ngaphandle, kuxhomekeke kwinto esinomdla ngayo ngelo xesha. Zonke izingxoxo, okanye ukuba kukho iifayile esizifunayo nathi. Sinokukhetha apha ukuba uthumele ntoni ngaphandle, ngokungafaniyo neWhatsApp apho yonke into yenziwe ngokuthe ngqo. Emva koko sinika elandelayo kwaye ngale ndlela iqala inkqubo yokuthumela ngaphandle izingxoxo ebesinazo kwisicelo. Inkqubo iya kuthatha imizuzu embalwa, kuxhomekeke kwinani leengxoxo kunye nomthamo weefayile ezikuzo. Kodwa kuyakhawuleza kule nkalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ungazikhuphela kanjani ngaphandle izingxoxo zeTelegram kunye neWhatsApp
Ndingathanda ukwazi ukuba ngaba ikhona indlela yokukhuphela iincoko kwiingxoxo ezifihlakeleyo, ndiyabona ukuba ayinakwenzeka. Ndiyayixabisa impendulo, enkosi;) !!!!
Akunakwenzeka ukuba wenjenjalo njengoko bencokola ngasese. Ubumfihlo kunye nokhuseleko kuzo ziphezulu.
Ukuthumela ngaphandle kwiTelegram, andinakho ukuvula useto oluphambili. Andiluboni olo khetho naphina. Enkosi!
Zintoni iivenkile zeSpotify kwaye zezantoni?